Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka & EU oo Heshiis Ka Gaadhay Dagaalkii Ganacsiga.
Maraykanka & EU oo Heshiis Ka Gaadhay Dagaalkii Ganacsiga.
Posted by ONA Admin	/ July 27, 2018
Waxaa shalay shir ku yeeshay magaalada Washington ee dalka Maraykanka wefdi ka socdey Midowga Yurub (EU) oo uu hoggaaminaayo madaxa komishinka midowga Mr. Jean-Claude Juncker iyo Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Shirkan ayaa labada dhinac uga hadleen sidii loo baajin lahaa dagaal ganacsi oo dhex mara EU iyo Maraykanka oo xulofo ahaa muddo aad u dheer. Trump oo saxaafadda la hadley kadib shirkooda ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen qorshe wada halad oo dhigaya in Tirifooyinka (canshuurta) labada dhinacba la gaadhsiiyo eber, lana qaado biraha lagu gudbey ganacsiga.
Trump ayaa EU ku eedeyn jirey in ganacsiga ay la leeyihiin Maraykanku aanu ahayn mid caddaalad ku dhisan, waxaana uu tusaale u soo qaadan jirey in wax-soosaarka beeraha Maraykanka aan loo iibgeyn karin EU, sidoo kale gawaadhida ay soo saaraan wershadaha Maraykanku aysan suuq ku lahayn EU, halka EU ay u dhoofiyaan sanadkasta malaayin gawaadhi ah iyo weliba wax-soosaarka beerahooda.
Trump ayaa ku soo rogey canshuur dhamaan birta iyo aluuminamka ka yimaada Yurub, sidoo kale waxa uu ku hanjabey in uu gadhsiinayo canshuurta gawaadhida Yurub 25%. Dalka Jarmalka ayaa ah kan ugu badan ee gawaadhidiisa loo iibgeeyo Maraykanka.
EU oo markii hore diidanaa in ay wada xaajood la galaan Maraykanka iyagoo sheegaya in aysan wada hadal geli karin iyagoo qori madaxa looga hayo, sida uu sheegay wasiir ka tirsan Xukuumadda Macron ee dalka Faransiiska.
Guusha u weyn ee EU wada hadaladii Washington gaadheen ayaa ah in canshuurta loo daayo sidii ay markii hore ahaayeen inta wadahadalkan socdo oo xal kama danbeys ah la gaadhayo taas oo canshuuraadka la gaarsiinayo eber.
Mr. Juncker madaxa kommishanka EU ayaa sheegay in miraha fuulka ama digirta ee beerladeyda Marayknku soo saaraan loo iibgeyn doono EU taas oo markii hore aan la oggoleyn maadaama tayada miraha Maraykanku aysan gaadhsiineyn tan Yurub.